Coupe Arabe U20 Nandresy an’i Djibouti ny Barea
Tsara fanombohana ny ekipam-pirenena Malagasy eo amin’ny “Coupe Arabe U20” tanterahina any Arabie Saoudite. Nivoaka mpandresy tamin’ny isa 4-3 isika nanoloana an’i Djibouti omaly.
Nampitaintaina ny lalao satria efa nitarika tamin’ny isa 2-0 ny mpifanandrina no nihoarantsika. Nisesy ny baolina ho an’ny Malagasy. Samy namono baolina 2 avy i Arnaud sy Raicardo, ka nitarika tamin’ny isa 4-2 isika. Mbola afaka nampiditra baolina iray nampihena ny elanelan’isa ny mpifanandrina, ka 4-3 no isa farany nisarahana. Ny mpilalao Malagasy no voahosotra ho “homme de match” tamin’ny alalan’i Todisoa Rafizy Andre. Teo amin’ny lalao ilany kosa dia nandresy an’i Bahrein tamin’ny isa 4-2 ry zareo Maraokanina, izay samy iray vondrona amintsika. Raha io no jerena, dia mitarika vonjimaika ny Maraokanina izay samy manana isa 3 mitovy amintsika, saingy manatombo eo amin’ny baolina tafiditra sy niditra tao anaty harato. Ny alakamisy 20 febroary izao amin’ny 6ora hariva ny lalao manaraka ho antsika izay hifanandrinana amin’i Barhein.